सूर्यबहादुर तामाङहरु किन मर्दैछन् थाहा छ सरकारलाई ? | हिमालयन ट्रिबुन
HT २०७७ जेष्ठ १८, आईतवार ११:४८
काठमाडौं । राजपाका सांसद राजेन्द्र महतोले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट आमजनताको पक्षमा नभएको र सत्तारुढ दलको स्वार्थसिद्ध गर्न मात्रै केन्द्रित भएको आरोप लगाएका छन् ।
आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राजश्व र व्ययको अनुमान माथिको छलफलमा भाग लिँदै महतोले कोरोनाका कारण समस्यामा परेका नागरिकलाई राहत दिन बजेटले कुनै सम्बोधन नगरेको, गरिब तथा गरिखाने वर्गको पक्षमा कार्यक्रम नआएकोमा रोष प्रकट गरे । उनले मुलुक सङ्घीयतामा गएको भन्ने तथ्यसमेत सरकारले बिर्सेको र स्रोत तथा साधनको वितरणमा समेत विभेद गरिएको बताए ।
लोकतन्त्रमा राज्य र नागरिक बीच राजनीतिक रुपमा सम्बद्धता, बफादारी, मालकियत, सहभागिता र सम्मान जस्ता आयाम हुने भन्दै महतोले नागरिकले राज्यबाट सम्मान नपाएको बताए ।
Spread the loveकाठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संकटका बेला पाएको अवसर सरकारले गुमाएको टिप्पणी गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले सरकारले संकटमा पाएको अवसरलाई गुमाएको बताएका हुन् । आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राजश्व र व्ययको अनुमान माथिको छलफलमा भाग लिँदै रिजालले मुलुकलाई संकटबाट पार […]